မဲဆွယ်ထွက်ကြတဲ့သူတွေကို ဖောင်ကြီးကနေ စောင့်နေမယ်ဆိုပြီး ကရုဏာဒေါသောနဲ့ ပြောလာတဲ့ မောင် - ApannPyay Media
မဲဆွယ်ထွက်ကြတဲ့သူတွေကို ဖောင်ကြီးကနေ စောင့်နေမယ်ဆိုပြီး ကရုဏာဒေါသောနဲ့ ပြောလာတဲ့ မောင်
October 18, 2020 by ApannPyay Media
ပရိသတ်ကြီးရေ အကယ်ဒမီမင်းသမီးချော နန္ဒာလှိုင်ရဲ့မောင်လေး သရုပ်ဆောင်မောင်ကတော့ မကြာခင်ကမှာကိုဗစ်ရောဂါကုသပျောက်ကင်းသွားခဲ့ပြီး အိမ်ပြန်ရောက်တာ (၃)ရက်ပဲ ရှိသေးပေမယ့် ဆရာဝန်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဖောင်ကြီး ကိုဗစ် ကုသရေးဌန ဆေးရုံကြီးမှာ Volunteer လုပ်ဆောင်နေပါတယ်နော်။
မိသားစုတွေ စိတ်ပူနေတဲ့ကြားက ကိုဗစ် ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ကိုယ်ကျိုးစွန့်ကာ အန္တရာယ်အများဆုံးနေရာဖြစ်တဲ့ ဖောင်ကြီး ကိုဗစ္ကုသရေးဌာနကို ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ခဲ့တဲ့ မောင်ရဲ့ စိတ်သဘောထားကိုတော့ အားလုံးက ချီးကျူးဂုဏ်ပြုနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်နော်..။
ဆရာဝန်တစ်ယောက်အနေနဲ့ အကောင်းဆုံးကြိုးစားအားဖြည့် ပါဝင်နေတဲ့ မောင်ကတော့ သူကိုယ်တိုင် ကိုဗစ် ရောဂါ ကူးစက်ခံရပြီး ဆေးကုသမှုတွေ ခံယူနေတဲ့အချိန်မှာလည်း အခြားလူနာတွေကို ကြည့်ရှု့စောင့်ရှောက်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်နော်။ မောင်ကတော့ အခုလို ကိုဗစ် ကပ်ရောဂါတွေ ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုတွေ များပြားနေတဲ့အချိန် လူစုလူဝေးနဲ့ မဲဆွယ်ထွက်ကြတဲ့ သူတွေအချို့ကို ကရုဏာဒေါသောလေးနဲ့ သတိပေးစကားလေး ဆိုလိုက်ပါတယ်နော်။
“မဲဆွယ်ထွက်ကြတဲ့ ညီလေး ညီမလေးတို့ရေ! အစ်ကို ဖောင်ကြီးကစောင့်နေပါတယ်နော်” ဆိုပြီး မောင်က သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားပြောထားတာဖြစ်ပြီး ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေကလည်း စနောက်ထားကြတာ တွေ့ရပါတယ်နော်။
ကဲ ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း လူစုလူဝေးတွေရှောင်ကာ အတတ်နိုင်ဆုံး အိမ်မှာပဲ Stay Home နေပြီး မဖြစ်မနေအပြင်ထွက်ရင်လည်း ကျန်းမာရေးစည်းကမ်းတွေကို စနစ်တကျလိုက်နာကာ ကပ်ရောဂါကာလကြီးကို အားလုံးနဲ့အတူ ကျော်ဖြတ်ကြရအောင်နော်။
မဲဆြယ္ထြက္ၾကတဲ့သူေတြကို ေဖာင္ႀကီးကေန ေစာင့္ေနမယ္ဆိုၿပီး က႐ုဏာေဒါေသာနဲ႔ ေျပာလာတဲ့ ေမာင္
ပရိသတ္ႀကီးေရ အကယ္ဒမီမင္းသမီးေခ်ာ နႏၵာလွိုင္ရဲ့ေမာင္ေလး သ႐ုပ္ေဆာင္ေမာင္ကေတာ့ မၾကာခင္ကမွာကုိဗစ္ေရာဂါကုသေပ်ာက္ကင္းသြားခဲ့ၿပီး အိမ္ျပန္ေရာက္တာ (၃)ရက္ပဲ ရွိေသးေပမယ့္ ဆရာဝန္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေဖာင္ႀကီး ကုိဗစ္ ကုသေရးဌန ေဆး႐ုံႀကီးမွာ Volunteer လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္ေနာ္။
မိသားစုေတြ စိတ္ပူေနတဲ့ၾကားက ကိုဗစ္ ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ကိုယ္က်ိဳးစြန႔္ကာ အႏၲရာယ္အမ်ားဆုံးေနရာျဖစ္တဲ့ ေဖာင္ႀကီးကုိဗစ္ ကုသေရးဌာနကို ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ခဲ့တဲ့ ေမာင္ရဲ့ စိတ္သေဘာထားကိုေတာ့ အားလုံးက ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္..။
ဆရာဝန္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အေကာင္းဆုံးႀကိဳးစားအားျဖည့္ ပါဝင္ေနတဲ့ ေမာင္ကေတာ့ သူကိုယ္တိုင္ ကုိဗစ္ ေရာဂါ ကူးစက္ခံရၿပီး ေဆးကုသမႈေတြ ခံယူေနတဲ့အခ်ိန္မွာလည္း အျခားလူနာေတြကို ၾကည့္ရႈ႔ေစာင့္ေရွာက္ေပးခဲ့ပါေသးတယ္ေနာ္။ ေမာင္ကေတာ့ အခုလို ကုိဗစ္ ကပ္ေရာဂါေတြ ကူးစက္ျပန႔္ႏွံ့မႈေတြ မ်ားျပားေနတဲ့အခ်ိန္ လူစုလူေဝးနဲ႔ မဲဆြယ္ထြက္ၾကတဲ့ သူေတြအခ်ိဳ႕ကို က႐ုဏာေဒါေသာေလးနဲ႔ သတိေပးစကားေလး ဆိုလိုက္ပါတယ္ေနာ္။
“မဲဆြယ္ထြက္ၾကတဲ့ ညီေလး ညီမေလးတို႔ေရ! အစ္ကို ေဖာင္ႀကီးကေစာင့္ေနပါတယ္ေနာ္” ဆိုၿပီး ေမာင္က သူ႔ရဲ့ ေဖ့စ္ဘြတ္စာမ်က္ႏွာမွာ ေရးသားေျပာထားတာျဖစ္ၿပီး ခင္မင္ရင္းႏွီးတဲ့ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းေတြကလည္း စေနာက္ထားၾကတာ ေတြ႕ရပါတယ္ေနာ္။
ကဲ ပရိသတ္ႀကီးတို႔လည္း လူစုလူေဝးေတြေရွာင္ကာ အတတ္နိုင္ဆုံး အိမ္မွာပဲ Stay Home ေနၿပီး မျဖစ္မေနအျပင္ထြက္ရင္လည္း က်န္းမာေရးစည္းကမ္းေတြကို စနစ္တက်လိုက္နာကာ ကပ္ေရာဂါကာလႀကီးကို အားလုံးနဲ႔အတူ ေက်ာ္ျဖတ္ၾကရေအာင္ေနာ္။
သိပ္ပံပညာရှင် တွေတောင် အဖြေရှာလို့မရသေးတဲ့ ဆန်းကြယ်လွန်းတဲ့ ဖြစ်ရပ်များ
အိမ်မှာ အပင်စိုက်ဝါသနာပါသူများ သိထားသင့်တဲ့ အပင်နိမိတ်
ဝက်ခြံကြောင့် ကျန်ခဲ့တဲ့ အမာရွတ်တွေ တစ်ပတ်အတွင်းပျောက်ကင်းစေတဲ့နည်း
အနက်ရောင် ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူတွေရဲ့ ထူးခြားတဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားများ
အိပ်ပျော်နေရာမှ ရုတ်​တရက် ထလိုက်ခြင်း၏ ကြောက်မက်ဖွယ်ဆိုးကျိုး